Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Erliza
Yonwabela amava angenakulibaleka nosapho lwakho kunye namaqela ngokuchitha iHolide yakho kwi-villa Alessandra Suite2 Balanganbeach, Swimpool yabucala
I-villa yabucala inegadi eyongezelelweyo ebanzi,
Umgangatho ongaphantsi omkhulu, igumbi lokuhlala elingaphandle kunye negumbi lokutyela, Indawo enkulu yokutshiswa lilanga ejikeleze idama kunye nombono obekwe kumphakamo wenduli.
Ukudala uMzuzo kunye nosapho kunye nabahlobo kuya kuba mnandi ngakumbi kunye nommandla omkhulu ojikeleze ichibi.10 min ngemoto ukuya eBeach
Ngena emva kwentsimbi yesi-5pm sixelele kwiintsuku ezimbalwa ngaphambili
Le villa inamagumbi okulala ama-3 anokuhlala ukuya kuthi ga kwi-10 abantu. Ngamagumbi amabini okulala kwinqanaba lesi-2, ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala kunye negumbi elinye kumgangatho ophantsi kunye negumbi lokuhlambela langaphandle. Igumbi lokuhlala elikhulu, ikhitshi kunye nendawo yokutyela kunye nendawo enkulu yokutshisa ilanga iya kuba yindawo egqibeleleyo
Indawo icwangciswe kakhulu kuba ibekwe kanye ecaleni kweNirmala waterpark, imizuzu emi-3 uhamba ukuya eNirmala Supermarket okanye eMinimart kwelinye icala. Sukuba nexhala malunga nokutya, ukuwela nje ungonwabela izitya ezahlukeneyo kunye nekofu evela kwi-cafe yaseBalangan ejongene ngqo ne-villa.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Erliza
Izimvo eziyi-1 526
UMaria Erliza yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Kuta Selatan